Amidy am-pandriana hopitaly, vidin'ny fandriana elektrika - Annecy
Nanomboka tamin'ny 2012 ny milina Annecy, nanomboka tamin'ny famokarana fandriana hopitaly, avy eo nanitatra ny famolavolana hopitaly manontolo. Ankehitriny dia indostria sy orinasam-pifandraisana izahay hanomezana ny mpanjifa fiantsenana mijanona iray. Ny faritry ny vokatra dia misy: kojakoja hopitaly, fitaovana fandidiana ary vokatra vonjy maika sns.
Taorian'ny fivoaran'ny 8 taona mahery, Annecy dia nanana 100staffs, izay, mpiasa matihanina sy teknika mihoatra ny olona 10, Assets manodidina ny 1, 000,000USD. Ny faritra fananganana dia 2000square metatra.
1. Rehefa ilaina ny fiasan'ny rollover havia sy havanana dia tsy maintsy apetraka amin'ny toerana marindrano ny velaran'ny fandriana. Toy izany koa, rehefa atsangana sy aondrana ny velaran'ny fandriana aoriana, ny latabatra am-pandriana dia tsy maintsy ampidinina amin'ny toerana marindrano. 2. Aza mitondra fiara amin'ny arabe tsy mitovy ary ...
1. Alohan'ny hampiasana ny fandriana ara-pahasalamana elektrika marobe, jereo aloha raha mifandray mafy ny tadin'ny herinaratra. Na azo antoka ny tariby mpanara-maso. 2. Ny tariby sy ny tadin'ny herinaratra an'ny actuator linear an'ny mpanara-maso dia tsy hapetraka eo anelanelan'ny rohy manainga sy ny fandriana ambony sy ambany ...
1. Ny fiarovana sy ny fitoniana amin'ny fandriana fitaizana be antitra. Ny fandriana fitaizana be antitra dia ho an'ny marary voafetra ny fivezivezeny ary efa hatory mandritra ny fotoana maharitra. Izany dia mametraka ny fepetra avo lenta kokoa momba ny fiarovana sy ny fitoniana eo am-pandriana. Ny mpampiasa dia tsy maintsy mampiseho mari-pahaizana fisoratana anarana sy fahazoan-dàlana famokarana o ...
AC-AS009 hopitaly mpamonjy voina hopitaly ...
Latabatra gynecological AC-GEB001
Carte Trolley marary mitsivalana AC-ST002
AC-MB018 Fandefasana hopitaly fitsaboana iray miasa iray
Fandriana hopitaly fitsaboana AC-MB016 Roa miasa ho an'ny ...
AC-MB009 Fomba fitsaboana marary telo ...
Carte Trolley vonjy taitra AC-ET027
Sarety Trolley fitsaboana, Trolley Medical, Trolley hopitaly, Trolley laptop, Trolley mpitsabo mpanampy tsy misy tariby, Trolley fitsaboana miaraka amin'ny vatasarihana,